Itiyoophiyaan Imaammata Ertraa Irratti Qabdu jijjire Jetti
Bitootessa 22, 2011
Ertraa kan ilaaleen imaamata alaa haaraa baasuu ishee kan ibsitee Itiyoophiyaan, Mootummaa Ertraa aangoo irraa busuuf kan danda'ame mara akka gootu ta'uu ibsite.
Mummichi ministeera Itiyoophiyaa Mallas Zenaawii odu gabaastoota waliin gaaffii fi deebii gaggeessaniin, mootummaa Ertraa aangoo irraa buusuuf mootummaan isaanii tarkaanfii diplomaasiis ta'e kan waraanaa ni fudhata jedhan.
Dubbi himaan ministrii haajaa alaa Itiyoophiyaa Dinaa Muftii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin marii gaggeessaniin, Hawaasni adunyaa Ertraa irratti tarkaanfii akka fudhatuuf gaaffii Itiyoophiyaaf dhiyessite maal dhibdeen waan ilaaleef jecha, amma ejjennaa jabaa kana fudhachuuf murtessine jedhan.
Kana malees Ertraan ,Itiyoophiyaa fi biyyoota gaanfa Afrikaa biroo jeequu yoo itti fufte, mootummaan Itiyoophiyaa kallattiin tarkaanfii fudhachuuf kan dirqamu ta'uu ibsaniiru. MP3 tuquun guutummaatti dhaggefadhaa